ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Chocolate Slim
ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ငါကြိုးစားခဲ့ Chocolate Slim။ ဒါဟာမသာထိရောက်သောအသုံးပြုမှုအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းသာယာသောအရသာမှ။ ပထမဦးဆုံးသောနေ့ရက်မှစ။ငါခံစားခဲ့ရတဲ့ခဲ့တယ်။ ရုံတစ်ပါတ်၏ပုံမှန်စားသုံးမှု၏အသောက်စရာငါဆုံးရှုံးခဲ့ရ ၇ ကီလိုဂရမ်။
ယခုငါဆုံးရှုံးခဲ့ရ ၈ ကီလိုဂရမ်နဲ့ဒီကော့တေးကိုသောက်ရုံ၌တလ။ ငါမစားအစာအပေါ်၊ယခုငါစားရန်အနည်းငယ်လျော့နည်းစား။ Chocolate Slim တကယ်ကြီးမြတ်၊ဒါကြောင့်သာမဟုတ်ဇီဝြဖစ်ထအမြန်နှုန်း(နှင့်သင်လောင်ကယ်လိုရီ)၊ဒါပေမယ့်လည်းအစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေ!
အဆုံးမဲ့အစားအစာ၊အစာရှောင်ခြင်းပြုမဆောင်ခဲ့ရေရှည်တည်တံ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ထို့နောက်ရရှိနှစ်ကြိမ်။ သာ Chocolate Slim ပုံမှန်အလေးချိန်အဘို့သိုထားလပေါင်းများစွာ၊ငါစားနီးပါးဘာမှမ။
အထိုင်များအလုပ်၊ရွှေ့ပြီးတာနဲ့၊အဘယ်သူမျှမအခွန်ပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေ့က။ အပိုအလေးချိန်စတင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေး၏အသက်ရှုမဝြခင်ပင်မှာကြွင်းသောအရာ။ ဒါကြောင့်လိုအပ်သောအရေးယူ။ ဝယ် Chocolate Slim[!@#$]၊ နှစ်လ—အနုတ် ၉ ကီလိုဂရမ်။ ဒီမှာရလဒ်ဖြစ်ပါသည်!
ငါဘယ်တော့မှမခံစားခဲ့ရကောင်းယူပြီးပြီးနောက် Chocolate Slim။ အချို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ကျွန်တော်ကကိုရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်။ ဆုံးရှုံးအလေးချိန်သင်စတင်ယူကော့တေး ၄ ကီလို၊ယခုအခါ၊ပိုပြီးပြောင်းရွှေ့ရန်၊အလေးချိန်တိတ်တဆိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲဝင်။